3 Calaamadood Oo Noloshaada Burburin kara Iyo Sagaal Dariiqo Oo Looga Adkaan Karo | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Waa Maxay Xanuunka Rifti Faali (Rift valley fever)?
Axmed Cabdi Qurbaawi — November 14, 2019
Saddex calaamadood Oo Noloshaada Burburin kara Iyo Sagaal Dariiqo Oo Looga Adkaan Karo
Naftaadaa leh qiimenyta kowaad
Is-yasida iyo isku quuri waaga aad naftaada kula kacdo ayaa carqalad weyn ku ah barashada sida naftaada loo jeclaado. Haddii aad had iyo jeer tahay mid dadka raali galiya, waxaad naftaada kula jirtaa jihaad iyo dagaal joogto ah, kumana noolaan doontid xasilooni iyo jacaylka aad u baahan tahay.
Markii aad joojiso raaligalinta iyo farxad-ka raadinta dadka kale, waxaad bilaabaysaa in aad is barato adigu oo is-jacayl idin dhex maro naftaadda. Waxaad ogaaneysaa in aad u baahnayn qof kale in uu wanaag dareensiiyo naftaada ee adigu aad u hayso farxada iyo rayn raynta.
Dadka in ta badan farxad ka baadi goobo dadka kale ama banaanka ka raadsha, waxay nool yihiin nolol cidhiidhi ah, waxay waqtigooda ku dhumiyaan is-ka dhaadhicinta kuwa kale, si ay u qaboojiyaan dabka ka holcaya uurkooda. Laakiin ma oga waxay dhaawac iyo waxyeelo aan dawo la ahany u geysanyaan nafahoodda.
Barashada sidaad u noolaan lahayd nolol farxad leh macnaheedu waxay tahay in aad naftaada jeclaato. Sideed ku heli kartaa farxada aan ka sheekeynayo markey kugu hareereysan yihiin dad badan oo aad rabto in aad raali galiso mid walba?!
Saddex astaamood oo aad naftaada ku burburinayso:
Waxaad isku daydaa in aad ka farxiso qof kasta. Waxaa is khilaafsan waaqica dunidaada hoose iyo mida aad fagaaraha kaga sheekeyso. Waxaad ka taanaasushay dhamaan hibooyinka Eebbe kugu kali yeelay, waxaadna dooratey in aad noolaato nolol qof kale.
Xaaladaan waxaad joojisaa in aad diiradda saarto ahaanshaha qofka runta ah ee aad tahay. Waxaad liidaah naftaada adigoo u curyaaminaya kuwa kaa tabar yar.
Waxaad mudnaanta kowaad siisaah qof kasta oo aan naftaada ahayn. Kaama ahan jacayl aad dadka kale u qabto ee waxaad dagaal qabow kula jirtaa naftaada. Waxaad baadi goobeysaa baadi kugu dhex milan!
Waad is-qarxin kartaa oo dili kartaa naftaada si aad qof kale uga farxiso. Si aad u ilowdo baahiyahaaga dhabta ah, waxaad xoogga saareysaa baahiyaha dadka kale si ay naftaadu u wanaagsanaato. Markaas waxaad iska dhaafeysaa in aad noolaato noloshaadii dhabta ahayd, mana buuxin doontid baahiyahaaga abidkaa.
Ma noqon karaysid qof isagu is-bixiya, daryeela, ama noloshiisa hugaansha. Laga yaabee in aad u oggolaato baahiyaha dadka kale in ay ka hormaraan kuwaaga.
Is-ahaanshahu waa mid ruuxa siiya xoriyad dhamaystiran iyo nolol dheeli tiran. Waxaa la yiraah daa jacaylku wuxuu ka bilowdaa naftaada; ogobey haddii aad naftaada sahwi ka qabto sidee u jeclaan kartaa dadka kale?
Haddii ay naftaadu ka baahi qabto aragtidaada sidee dadka kale baahidooda uga sheekeyn kartaa? Hadii naftaadu xasilooni kugu haysan sidee u xasilin kartaa dadka kale qalbiyadooda? Haddii…. Haddii…. Haddii……
Hadaadan jecleyn qofka aad tahay, waxaad ku dhibtoon doontaa nolosha, waxaadna ku dhamaysaneysaa noloshaada in aad ka farxiso qof kasta oo ahayn adiga. Ilaa in ta aad naftaada hoos u dhigayso waxaad geed dheer ka fuushay hibo kasta oo aad lahayd adigu.
Sababta dhabta ah ee aadan u joojin karin is-faquuqa naftaada ayaa noqon karta cabsi iyo shaki aad ka qabto naftaada, taasoo kugu kalifaysa in aad qariso cid dhabta ah ee aad tahay, buuxisana baahiyaha dadka kale. Sidoo kale waxaad aaminsan tahay haddii aad naftaada ka dhigto mid muhiim u ah dadka kale markaas iyagu kaaama tagayaan.
2. Waxaay noloshaadu ku dhamaan nolosha dadka kale. Waxaad iska nooshahay nolol aan ahayn taada. Waxaad iska indho tiraysaa dhibaatooyinka iyo hibooyinka noloshaada. Waxaad maal gashanaysaa kuwa kale laakiin naftaada cadow baad u aragtaa.
Waxaa door bidaysaa in aad dadka kale ka dhigto kuwa farxsan, laakiin adigu hoos faruurayahaad qaniinsan tahay. Waxaad dhibkaas oo dhan u mareyso soo in dowladaada la aqoonsado un maaha?
Si aad u hesho ammaan, jacayl, taageero, iyo xiriir, marka, su’aashu waxay tahay maxaad ugu dhiiran la’dahay in aad noloshaada adigu hagaajiso oo u dhibaysaa? Soo ma heli kartid in aad gudaha iyo dibadaba ka dhoola cadayso. Adigu haddaad isku istaagto oo naftaada quwayso dadku soo si bilaa baryo ah kugu sacabin mayaan?
Maxaad u dareemi la’dahay in aad tahay qof go’aan leh oo Eebbe kaligii abuurey basharkana ugu san dheer waayo waxaad tahay ku la karaameeyey? Haddii aad joojiso in aad diiradda saarto dadk kale, waxaad dareemaysaa in aad adigu tahay kan loo bahaan yahay balse isagu isku baahan. Ha ka cabsan in aad noloshaada ku nolaato. Iyada ayaa ah farxada iyo hormarka aad ku riyooneysid.
3. Cabsidu waxay kaa dhigeysaa mid diirada saara dadka kale oo aan naftiisa daryeeleynin. Waxaad is-moogsiineysaa naftaada, waxaana dayacaysaa baahiyahaaga dhabta ah. Cabsidu waxay naftaada ka dhigtaa mid aan qiimo lahayn, oo aan naftiisa jeclayn. Waxay kuu jihaysaa dadka kale si aad dareento fiicnaan, waayo iyagu waxay ku ansaxin karaan fiicnaanta sababtoo ah adigu naftaada uma xaqiijin kartid!
Cabsidu waxay naftaada ka weecinaysaa dareenkaaga dhabta ah, adigoo la qabsanaya dabeecadaha dadka kale iyo noloshooda kuwaas oo ugu danbeyn burburinaya noloshaada. Mar kasta oo aad ka orodid naftaada waxaa sii badanaya dhibaatooyinka noloshaada, maalinba maalin ayey ka sii dareysaa ilaa aad burburiso oo lumiso noloshaada oo dhan!
Waqtigaaga iyo cimrigaaga oo dhan ayaa ku lumaya isku dayga in aad naftaada ka cararto. Waxaad raadineysaa wado ka baxsan dareenkaaga mana jirto hab kale oo aad dariiqa nolosha ku heli karto ilaa aad adigu is aqoonsato. Nabi Mohammed(Scw) Soo ma odhan “Eebbe ha u naxariisto ku noloshiisa tabarteeda gartey”.
Halkaasey guushu iyo badhaadhuhu ka bilowdaan. Haddii aad adigu naftaada weerar joogta ah kula jirto ayaad filaysaa in ay idin dhexdhexaadinayaan? Haddii aadan adigu naftaada la sheshiin kareyn ayaa idin heshiisiinaya?
Haddii aad adigu is-gumaysatey yaad ugu ciil qabtaa noloshaada liidata? Si kastaba ha noqotee, si kastoo aad u soo jiidato dadk kale, ma tihid ruuxa saxda ah ee aad u maleyneyso inaad tahay. Maahid qofka aad runtii tahay!
Runtu waxay tahay, waxaad raadineysaa kalgacalka dadka kale, halkii aad ka heli laheyd jacaylka naftaada dhexdeeda, markaas miyaa tahay ruuxa aad u malaynayso in aad tahay?
Xaqiiqdu waxay tahay, qofna ma beddeli karo dareenkaaga, noloshaada, hormarkaaga iyo naftaada haddii aadan adigu u aqbalin naftaada sida ugu fiican. Haddii aadan arki karin qiimeynta dhabta ah ee naftaada, waxaa badan raaligalintaada iyo jacaylka idin ka dhexeeya adigiyo dadka kale, taasina waxay dhaawaceysa naftaada.
Markaad isku aragto astaamahan ogow waxaad burbur kuwadaa naftaada! Ahayga niyad jabin waxaad wali beddeli kartaa sida aad naftaada u aragto, waxaadna u noolaan kartaa si aad u qalanto.
Halkaan waxaa ah sagaal siyaabood oo aad naftaada u jeclaan karto, unna joojin karto wax-yeeleynta noloshaada:
Bilow in aad mudnaanta siiso naftaada oo aad diiradda saarto naftaada, halkii aad mudnaata kowaad siin lahayd dadka kale.
Dhageyso naftaada oo run ka noqo baahiyahaaga iyo waxaad rabto. Weydii naftaada, “Sideen dareemayaa hadda?” ama “Tani ma waxaan doonayaa?” ” Ma noolahay noloshaan doortey anigu, mase dad kale ayaan ka shidaal qaataah?”. Adigu is ahow mar walba.
Baro sidda naftaada loo jeclaado oo aan nafta loo yasin ama ciqaabin. Naftaadu xaq bay kugu leedahay ee cadaalad sameeh.
U muuji naftaada karti adoo qancinaya. Tusaale: Xad u yeel ama xuduudo oo dheh “maya” waxaadan raali ka ahayn.
Aamin naftaada. Dadka kale kaama tagayaan markii aad si fiican u daryeesho baahiyahaaga iyo noloshaada. Halkii aad ka dareemi lahayd hoos u dhac iyo liidnimo markaad dadka kale ka farxiso.
Markii ay wax kaa qaldamaan, xusuusnow in aad tahay bashar ay khasab tahay in uu khaldamo. U fiirso wado kasta oo aad ku xalin karto dhibkaaga horeyna uga soco.
Weydii naftaada waxa ujeeddooyinkaagu yihiin, ama waxa adiga kuugu muhiimsan noloshaada. Adigoon u aabo yeeleyn dadka kale caddeeh hadafkaaga, si aad naftaada u hormariso.
Ha kaa go’naato in aad naftaada xushmeyso oo naftaadana runlow u ahaatid. Adigoo kaalin mug leh ka qaadanaya is-jacaylka naftaada.
Marka aad dareento in naad ka tanaasusho ama aad iska ilowdo yoolalkaaga, weydii naftaada, “Sidee bay noqon noloshaydu haddii aan joojiyo tan”? Waxaad helaysaa is-maxabayn iyo jacayl kaala dhaxeeya naftaada halkii kolkii hore aad ku tiirsaneyd dadka kale si ay kugu saxiixan fiicnaanta.
Adigu naftaada xoogga saar halkii aad ka raadin lahayd oggolaansho iyo kalgacal dadka kale, ha ka tanaasulin naftaada marna. Waxaad kaga gudbi kartaa adigoo badala dhaqankaaga iyo sida aad naftaada u aragto.
Isbedelka dhabta ahi wuxuu ka yimaadaa bedelka habka aad ula dhaqanto naftaada. Abuur farxada halkii aad ka raadin laheyd meel ka baxsan naftaada. Markii aad naftaata wax daymiso adigu un baa is daymiyey waxaad naftaada maanta daymiso ayaad biri heli doontaa.
Kala dooro inaad naftaada maal gashato oo aad biri ku noolaato faa’iidadii ay ku dhashay iyo in aad dadka maal gashato oo aad khasaaro mooyee faa’iido u joog noqon. Shaatigaad/diracaad u xidho naftaada adiga un buu ku qurxiyaa, haddiise aad cid kale u xidho cidaas un baa ku dhalaashee adigu waad ka aradan tahay.
Markii aan joojino in aan diiradda saarno qof kasta oo kale noloshiisa, waxaan xor u nahay in aan gaarno himilooyinkayga oo aan ku noolaano sida nafteyda dhabta ahi raali ka tahay ee aan qofba qofka kale noloshiisa noolaan.
Haddii aad aqoonsatid calaamadahaas is-dabo marsan oo la yidhi kii dadka raali galiyaa nin ah, kii naftiisa jeclaadana waa nacas, waad ka gudbi kartaa oo abuuri kartaa kalgac adiga iyo naftaada ka dhexeeya.
Markaad beddesho sidaad naftaada u dareemeyso/u aragto waxaad beddeli doontaa sida aad naftaada ula dhaqanto. Markii aad badasho sidaad naftaada ula dhaqanto waxaad go’aan ka gaareysaa siday dadku kula dhaqmaan, markaad badasho siday dadku kula dhaqmaan waxaad iftiin ay wax ku arkaan u noqoneysaa dadka kale. Mar haddaad ka adkaato macallinkaaga gudaha, waxaad garwaaqsan doontaa qiimahaaga dhabta ah, waxaadna beddeli doontaa aduun-aragaaga, waxaadna ka takhalusi doontaa dabeecadda-is-dhiibidda iyo isku-quuri waaga leh.
Tags: 3 Calaamadood Oo Noloshaada Burburin kara Iyo Sagaal Dariiqo Oo Looga Adkaan Karo
Next post "Waxaan dhibbane u noqday WhatsApp-ka la jabsaday waana naxsanahay hadda"
Previous post 'Afartii Qof ee Aan Jimicsi Samayn mid Ayaa Khatar Kujira' Haayada caafimaad adduunka
Waa qoraa ka tirsan Tuke Somalism. Waa qoraaga buuggaagta kala ah "Baro Luqadda Hindiga, iyo Indho Habeenno". Wuxuu caan ku yahay qorista sayniska iyo macdanta. Wuxuu kaloo qoraa mowduucyo xasaasi ah oo ku saabsan hormarinta shaqsiga iyo falsafada guusha. Waa hal-abuure ku raaxeysta akhriska buuggaagta iyo fekeradaha dadkii horre curiyeen.